Latest Posts by Martin Vrijland
Iyo coronavirus covid-19 bvunzo yemhino inorwadza zvakanyanya uye pamwe inotora yako DNA
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 14 July 2020	• 11 Comments
Nei Covid-19 bvunzo yekumusoro inofanirwa kukandwa yakadzika kwazvo mumhuno? Yakadzika zvekuti vanhu vachiri kutambudzika nayo mazuva mashoma. Izvi zvichiripo panguva iyoyo munhu wese akasungwa nemunwe wemuromo, nekuti hutachiona hunogona kunge huri mumhepo kana kudonha kwemvura? Saka izvo hazvina kupokana. Kana coronavirus yakanga yakatapukira, […]
Wakarasikirwa nehondo? Kana isu tichanyatsomuka uye kutora chiito?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 10 July 2020	• 7 Comments
Hazvina kupfupika zvinoshamisa kuona kuti vaverengi veMartin Vrijland, avo vanga vachirwira kwemakore manomwe nehafu nekuda kwekumutsa mamiriro asina kumboitika emapurisa, vanodzingwa kuenda kumatanho matsva anotaridzika akanaka akadai sa 'Café Weltschmerz' uye 'Hondo yatotorerwa' naSven. Hulleman. Karel van Wolferen, ane mukurumbira pamakwara iwayo, anoregedza […]
Coronavirus covid-19: izvo zvatisinganzwe nezvaMaurice de Hond naWillem Engel, chikamu 2
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 9 July 2020	• 18 Comments
Muchinyorwa chapfuura chechinyorwa chino ndakatsanangura nzira iyo hurukuro pamusoro peaerosols, madonhwe mahombe uye iyo imwe nehafu yemamita kure zvinoita senge hurukuro yekurutsa yakapihwa naMaurice de Hond naWillem Engel, nekuti vanodzivisa iwo mubvunzo mukuru, wokuti: " Chii chinonzi hutachiona, hutachiona hunoshanda sei uye sei […]
Coronavirus, huswa infestations uye zvimwe zviitiko zvechiporofita zviri kuitika
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 8 July 2020	• 10 Comments
Dzimwe nguva zvinoita sekunge tiri kupupurira zviitiko zveuporofita, senge mune izvo zvehuswa zvinotama izvo zvino zvinodya minda yakakura yezvikafu zvakakosha pamakondinendi matatu. Iyo coronavirus yakakanganisa zvakanyanya hupfumi hwenyika, uye kazhinji yakave ichitsanangurwa pano kuti zvinoita sekunge coronavirus yaingovewo albi ku […]
Anofungidzira US Hondo Yemagariro inoita kunge iri padyo nepedyo: maBMM mauto ari kufora muGeorgia
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 6 July 2020	• 0 Comments
Kune avo vachiri kufunga kuti bato reLife Lives Matter rakawana rumutsiridzo rwepamberi nekuda kwekuuraya kwaGeorge Floyd pamwe nemhirizhonga yepasi rose zvakakonzera, zvinoda kuona mifananidzo iri pasi apa. Rakanga riri paZuva Rekuzvimirira, Chikunguru 4th.Pari zvino, musikana musikana wemakore masere aine mutema […]
Coronavirus covid-19: nezvatisinganzwe Maurice de Hond naWillem Engel
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 2 July 2020	• 6 Comments
Kana tikatarisa kumishumo yenyika dzese, zvinoita sekunge sevhiri yechipiri yekoronavirus yave munzira. Kunyangwe iyo iri chaiyo ari coronavirus wave kana masaisai ehuwandu uye Hollywood maitiro emidhiya mifananidzo yeiyo yakazara ICs ichiri mubvunzo. Mubvunzo sei iyo covid-19 coronavirus inopararira […]
Bhuku idzva Martin Vrijland rakanzi 'Coronavirus covid-19 izvi zvinopera kupi?' iripo ikozvino
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 30 June 2020	• 5 Comments
Lely ini ndanga ndichishanda nesimba pabhuku idzva rakanzi 'Coronavirus covid-19 izvi zvinopera kupi?' Kubuda kweiyo coronavirus covid-19 ndiyo yaive fungidziro yekufungidzira yakaitika, sekuwiswa kwezvinhu zvehunyanzvi zvandaifungira. Iri bhuku rinotsanangura zvakadzama kuti ndeipi tenzi script inozivisa uye ndinoita sei izvi […]
Iyo Escher Penrose masitepisi evanopikisa FvD, Willem Engel naMaurice de Hond
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 29 June 2020	• 1 Comment
Iyo Penrose masitepisi ndeyekunyepedzera kwechiitiko kana chinhu chisingagone chakagadziriswa neBritish masvomhu uye nyanzvi yezvemaitiro Roger Penrose muna 1958. Iyo nhanho imwecheteyo yakambofungidzirwa nemutambi weSweden Oscar Reutersvärd, asi yaisazivikanwa kunze kweSweden. Pamatanho zvinoita kunge zvinoita kuti ukwanise kufamba uchikwira (kana kutsika) kuti udzokere panhanho imwecheteyo. Mu […]
Svondo June 28 kuratidzira Malieveld rudo, kutsungirira uye kuvimba kuchengetedza mambure eVirus Madness
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 26 June 2020	• 20 Comments
"Rudo, kutsungirira uye kuvimba". Ndakanga ndine makore gumi okukura apo ini ndakafungidzira nerudo rweChechi uye kunzwisisa kuti iwe waizodikanwa kana iwe ukangotendeukira kuna She. Pandakasarudza kusadaro, rudo rwakakurumidza kushanduka rikava chirango. Nzvimbo imwechete yandiri […]
Chii chinonzi Black Lives Matter, LGBTI uye inofanirwa Covid-19 vaccines vane zvakafanana?
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 24 June 2020	• 6 Comments
Chii chinonzi Black Lives Matter, LGBTI uye inofanirwa Covid-19 vaccines vane zvakafanana? Pakupedzisira zviri pamusoro pekushandurwa kwevanhu kuita vanhukadzi vasina kwavakarerekera, vanevara, vanobva vanhu. Rega nditsanangure. Simbisa zvigaro zvako! Sezvinei nezvangu, zvakanyatsojeka kuti chena aristocracy bloodlines ane mhosva yemazana emakore ekudzvinyirira kwe […]
Kushanya kwakazara: 4.305.224
SalmonInClick op Iyo coronavirus covid-19 bvunzo yemhino inorwadza zvakanyanya uye pamwe inotora yako DNA
Riffian op Iyo coronavirus covid-19 bvunzo yemhino inorwadza zvakanyanya uye pamwe inotora yako DNA
Martin Vrijland op Iyo coronavirus covid-19 bvunzo yemhino inorwadza zvakanyanya uye pamwe inotora yako DNA
AnOpen op Iyo coronavirus covid-19 bvunzo yemhino inorwadza zvakanyanya uye pamwe inotora yako DNA